लिनक्स मा भिडियोहरु बाट GIF बनाउनुहोस् Ubunlog
फ्रान्सिस्को जे | | लिनक्स, Ubuntu
लिनक्समा भिडियोबाट एनिमेटेड GIF सिर्जना गर्नुहोस् यो अत्यन्तै सरल काम हो। यसका लागि हामीलाई दुई उपकरणहरू चाहिन्छ जुन संसारमा धेरै लोकप्रिय छ लिनक्स: जिम्प र ओपनशट।
यदि हामीसँग पहिले नै हाम्रो कम्प्युटरमा स्थापना गरिएको छैन भने हामी दुई प्रोग्रामहरू स्थापना गरेर शुरू गर्नेछौं। दुबै अनुप्रयोगहरू आधिकारिक भण्डारहरूमा छन् Ubuntu र परिवार, त्यसैले कन्सोल खोल्नुहोस् र आदेश टाइप गर्नुहोस्:
वा तपाइँको मनपर्ने प्याकेज प्रबन्धक मा जानुहोस् र म्यानुअली स्थापना गर्नुहोस्।
हाम्रो GIF सिर्जना गर्न, हामी पहिले खोल्छौं OpenShot भिडियो जसबाट हामी यसलाई निकाल्न लाग्दछौं। हामी आफूले चाहेको टुक्रा चयन गर्दछौं, काट्छौं र हामी छविहरूको उत्तराधिकारको रूपमा निर्यात गर्दछौं.
अब हामीसँग ओपनशटमा सिर्जना गरिएको फाईल खोल्छौं गिम्प GenericName। यसलाई तहहरूको रूपमा खोल्न निश्चित गर्नुहोस्; यसका लागि जानुहोस् अभिलेख र त्यसपछि विकल्पमा तहहरूको रूपमा खोल्नुहोस्.
एकचोटि खोल्नुहोस्, केवल फाइल GIF ढाँचामा बचत गर्नुहोस् (फाइल As यस रूपमा बचत गर्नुहोस्).
हामी यसको विकल्प चयन गर्दछौं एनिमेसनको रूपमा बचत गर्नुहोस्.
अन्तिम चरणमा तपाईंको प्राथमिकताका विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईं यसको डिफल्ट मानहरूको साथ सबै छोड्न सक्नुहुन्छ।
तयार छ, अब तपाईं विश्व संग आफ्नो GIF साझा गर्न सक्नुहुनेछ। यो नोट गर्नुपर्दछ, लिनक्समा सबै चीज जस्तै, यो सिर्जना गर्ने एक मात्र तरीका हो भिडियोहरूबाट एनिमेटेड GIFs। हामी पछि अरू विधिहरू छलफल गर्नेछौं।
थप जानकारी - उबुन्टु १२.०12.04.1.१ जारी गरियो, ट्विटर लिनक्स फाउन्डेशनमा मिल्छ, कुबन्टुमा फायरफक्सको हेराइ र अनुभव एकीकृत गर्नुहोस्
मुहान - कुयना
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » सामान्य » लिनक्स » लिनक्स मा भिडियो बाट एनिमेटेड GIFs बनाउनुहोस्
तपाई जस्तो मानिसहरुलाई धन्यवाद।
हाम्रो लिनक्स अनुभव राम्रो बनाउँदछ, र यो distro अझ बढि लिन्छ
यसलाई च्याम्पियन राख्नुहोस्
Vtroig लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईं कसरी खुला शटमा छविहरूको अनुक्रम बचत गर्नुहुन्छ? म केवल निर्यात गर्न विकल्प देख्छु तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै पनि छैन कि यसले छविहरूको उत्तराधिकार हो। मद्दत
साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।